दुई वर्ष अघिमात्र विवाह बन्धनमा बाँधिएकी रुपन्देही तिलोत्तमा–८ मणिग्रामस्थित माइती भएकी २७ वर्षीया सीता भण्डारी पौड्यालको आफ्नै घरमा रहस्यमय मृ*.त्यु भएको छ । उनले उक्त नगरपालिका–५ घर भएका ४३ वर्षीय टीका पौड्यालसँग विवाह गरेकी थिइन् । सीताको आफ्नै घरको कोठामा रहस्यमय मृ.*त्यु भएको मंगलबार माइतीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी जानकारी दिएका छन्।
तीज मानेर घर फर्किने गरी भदौ ६ सीता माइती गएकी थिइन्। सितालाई श्रीमान टीकाले भदौ १९ गते दिउँसो घरमा भतिजको बर्थडे छ भनेर घरमा बोलाएका थिए।टिकाले उक्त समयमा पाल्पा थिए। उनले फोनबाट सितालाई घर जाउ म साँझमा आउँछु भनेका थिए। त्यसपछि सिता घर फर्किइन्।माइतीबाट घर फर्किएकी सितालाई माइतीले पटकपटक फोन गरे। फोन उठेन।
लगातारको फोन नउठेपछि अन्य व्यक्तिलाई पनि सम्कर्प गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर कसैसँग कुरा भएन। त्यसको अर्काे दिन एक्कासी उनको माइतीलाई काम छ भनेर टीकाको घरबाट बोलाइयो। माइतीजन त्यहाँ पुग्दा सिता अस्ताइसकेकी थिइन्। अहि सेतकै बिषय मा वक्ता बिजय घिमिरे ले आफ्नो बिचार राखेका छन हेरौ भिडियो
बल्ल खुल्यो सबिता भण्डारी ह’त्या प्रकरणको भित्री रहस्य, छोरालाइ आमा भन्न पनि किन दिइएन ! बच्चाको ज्यान खतरामा हेर्नुहोस
सीता भण्डारीको अनुस,न्धानमा आयो कसैले नसोचेको मोड, सिताको ह,त्या कि आ,त्महत्या ? भेटियो प्रमाण (भिडियो सहित)